Guddiga doorashada oo shaaciyay xilliga doorashada iyo sababta keentay in dib loo dhigo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga doorashada oo shaaciyay xilliga doorashada iyo sababta keentay in dib loo dhigo (AKHRISO)
Kadib shir jaraa’id uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Cumar Maxamuud Dhagey ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay dib u dhacday doorshadda Soomaaliya ee sanadkaan 2016-ka.
Wuxuu guddoomiye Cumar Dhagey sheegay inay haatan soo saareen jadwal cusub oo ku saabsan doorashooyinka sanadkaan 2016-ka, maadaama kii hore uu dib u dhacay.
Nuqul ka mid ah jadwalkaas cusub oo soo gaaray warbaahinta Bulshoweyn, ayaa waxaa lagu faah-faahiyay nidaamka ay u dhici doonaan doorashooyinka sanadkaan.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay dhici doonto 30-ka bisha November, taas oo markeedii hore lagu heshiiyay inay dhacdo 30-ka October balse ay dib uga dhacday.
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa hore usoo gudbisay in xilliga doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 30-ka November ee 2016-ka HALKAAN KA AQRISO WARBIXINTA AAN HORE UGA QORNAY
Waa markii labaad uu dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka ee sanaadkaan 2016-ka, lamana oga waxa ay jadwalkaan cusub ka dhihi doonaan musharaxiinta doorashada xilka madaxweyne iyo xisbiyada mucaaradka ee dalka.
Hadaba nuqulka Jadwalka Cusub ee nasoo gaaray ayaa u qoran sida hoos ku xusab:-